युद्ध समयमा कसरी भैरहेको छ पुटिनको सुरक्षा ?
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जीवनमा तुरुन्तै केही हुँदैन । रुसी राष्ट्रपतिको हरेक कदमलाई सयौं अंगरक्षकहरूले नजिकबाट नियालेर हेर्छन्, जो उनीसँग २४ घण्टै बस्छन्।उनको खाना गोप्य रूपमा तयार गरिन्छ र उनले पिउने सबै कुरा पहिले उनको नजिकको सल्लाहकारद्वारा जाँच गरिन्छ। केजीबीका पूर्व अधिकारीहरू पुटिनको वरपरका खतराहरूबारे राम्ररी सचेत छन्, विशेष गरी युद्धको समयमा।
पुटिनले युक्रेनमा रुसको आक्रमणको नेतृत्व गरिरहेका छन् र यसले उनको लागि केही थप सुरक्षा जोखिमहरू खडा गरेको छ। तर, पुटिनको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हो ? तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्न के उपायहरू छन् ? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ हामी तपाईका लागि ल्याएका छौं।
बलियो सुरक्षा टोली
हाल रूसमा संचालित धेरै सुरक्षा सेवाहरुमध्ये एक राष्ट्रपति र उनको परिवारको सुरक्षाको लागी विशेष रूपदेखि समर्पित छ। यसलाई ‘रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा’ भनेर चिनिन्छ। यसले रूसको संघीय सुरक्षा सेवा एफएसओलाई रिपोर्ट गर्छ, जुन केजीबीबाट बनेको थियो। केजीबी आफैं उच्च रूसी अधिकारीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने काम गर्दछ। कानमा इयरफोन लगाएर कालो सूट लगाएका यी गार्डहरू दिनरात छायाँ जस्तै पुटिनसँगै बस्छन्।
रुसको सरकारी मिडिया रसिया बियोन्डका अनुसार जब यी एजेन्टहरू पुटिनसँग विदेशमा जान्छन्, तिनीहरूले आफूलाई चार सर्कलमा विभाजन गर्छन्। पुटिनको सबैभन्दा नजिकको घेरा आफ्नै व्यक्तिगत गार्डहरूको हो। दोस्रो सर्कल ती गार्डहरूबाट बनाइएको छ जसमाथि जनताको ध्यान जाँदैन। तेस्रो सर्कलले भीडको परिधिलाई घेरेको हुन्छ र शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई यसमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ। र, चौथो तथा अन्तिम सर्कल वरपरका भवनहरूको छतमा अवस्थित स्निपरहरूको हो।
मार्क गेलिटो एक रूसी सुरक्षा विशेषज्ञ र देशको सुरक्षा मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्ने सल्लाहकार फर्म मायाक इन्टेलिजेन्सका निर्देशक हुन्। ‘पुटिनलाई हेलिकप्टर मनपर्दैन, उनी प्राय: मोटरसाइकल, धेरै ठूला कालो कारहरू आदि सहितको ठूलो काफिलेमा यात्रा गर्छन्। यसका लागि धेरै पटक यातायात बन्द गरिन्छ ।’ गेलिटो भन्छन् ।
रसियाको राष्ट्रपति सुरक्षा सेवालाई ‘रूसी राष्ट्रिय गार्ड’ वा रोजग्भार्डियाले समर्थन गरेको छ। यो ६ वर्ष पहिले पुटिन आफैंले निर्माण गरेका थिए, र कतिपयले यसलाई राष्ट्रपतिको ‘व्यक्तिगत सेना’ भनेर उल्लेख गरेका छन्। यो रूसी सशस्त्र बलहरूभन्दा फरक छ, यद्यपी यसको आधिकारिक मिशन रूसी सीमाहरू सुरक्षित गर्नु, आतंकवादसँग लड्नु र सार्वजनिक कानून र व्यवस्थाको रक्षा गर्नु हो। व्यवहारमा यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम पुटिनलाई धम्कीबाट बचाउनु हो।
‘सबैलाई थाहा छ रुसी नेशनल गार्ड पुटिनको व्यक्तिगत गार्ड हो,’ बेलायतको बाथ विश्वविद्यालयका रुसी शैक्षिक विज्ञ स्टीफन हलले भने, ‘र राष्ट्रपति आफ्नो बाँकी सुरक्षा सेवाहरूको सर्कलमा धेरै सुरक्षित छन्।’नेसनल गार्डको नेतृत्व हाल पुटिनका पूर्व अंगरक्षक भिक्टर जोलोटोभले गरिरहेका छन्। उनलाई राष्ट्रपतिको वफादार सहयोगी मानिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा यो सुरक्षा बलमा सैनिकको संख्या झण्डै चार लाखले बढेको छ। हल भन्छन्, ‘यो ठूलो संख्या हो, अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा इकाईमा गार्डको संख्या यो आँकडाको नजिक पनि छैन।’
तिनीहरूले पुटिनलाई कसरी जोगाउँछन् ?
पुटिनको सुरक्षाका लागि कुन हदसम्म उपायहरू प्रयोग गरिन्छ भनेर जान्न गाह्रो भए पनि क्रेमलिन र रूसी सुरक्षा विज्ञहरूले यस विषयमा केही प्रकाश पारेका छन्।पुटिनको सुरक्षा कभर सबैभन्दा कडा उनको खाना हो। विषको डरले पुतिनसँग एक व्यक्तिगत परीक्षक छ । मार्क गेलिटोका अनुसार जसले राष्ट्रपतिसामू आउने सबै कुराको जाँच गर्दछ।
‘यो एक शैलीको अंश हो जुन आधुनिक राष्ट्रपतिभन्दा मध्ययुगीन राजा जस्तै छ,’ गेलिटोले भने। साथै, जब पुटिन रूस बाहिर यात्रा गर्छन्, राष्ट्रपतिको टोलीले उनले प्रयोग गर्ने सबै कुरा जाँच गर्दछ।गेलोटी भन्छन्, ‘पुटिनले खाने सबै खानेकुरा तिनीहरूले लिन्छन्। उदाहरणका लागि यदि आधिकारिक शैम्पेन टोस्ट छ भने पुटिनले आफ्नो टोलीले ल्याएको बोतलबाट शैम्पेन लिन्छन्। त्यसबाट होइन।’
स्मार्टफोन प्रयोग नगर्ने
पुटिनको सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण मानिने अर्को उपाय भनेको क्रेमलिनभित्र स्मार्टफोनहरू रोक्नु हो। रुसी राष्ट्रपतिले आफैंले यी उपकरणहरू प्रयोग नगरेको पुष्टि गरेका छन्। सन् २०२० मा रुसी समाचार एजेन्सी टाससँगको अन्तर्वार्तामा उनले यो कुरा स्वीकार गरेका थिए । उनले कसैसँग सम्पर्क गर्न चाहेमा त्यसका लागि आधिकारिक लाइन रहेको पनि बताए ।
उनका सल्लाहकारहरूले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका छन् । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बारम्बार पुटिनसँग ‘समय नभएको कारण’ मोबाइल फोन प्रयोग नगर्ने बताएका छन्। तर, सत्य यो हो कि पुटिनले त्यसो गर्दैनन् किनभने उनको इन्टरनेटमा अलिकति पनि विश्वास छैन।
विगतमा उनले इन्टरनेट ‘सीआईए९अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी परियोजना’ हो भनी संकेत गरेका छन् र रूसीहरूलाई गुगल खोज प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनी विश्वास गर्छन् कि यसबारे अमेरिकीहरूले सबै जानकारीको निगरानी गर्छन् ।
गेलोटी भन्छन्, ‘पुटिन कमै मात्र इन्टरनेट चलाउँछन्, उनलाई फोन मन पर्दैन । र त्यो ठीक छ। सुरक्षाको मामिलामा उनी इमान्दार छन् । पुटिन बिल्कुल सही छन्। स्मार्टफोनहरू धेरै सुरक्षित छैनन्।’
विज्ञहरू भन्छन् कि पुटिन उनका सल्लाहकारहरूले दिएका कागजी फाइलहरूमार्फत् जानकारी लिन्छन् । ‘पुटिनले आफ्नो दिन तीनवटा सुरक्षा ब्रीफिङहरूबाट सुरु गर्छन्। एउटा जसले सम्पूर्ण विश्वलाई चिन्ता गर्दछ। एउटा रूसमा के भइरहेको छ र तेस्रो उच्च वर्गमा के भइरहेको छ भन्ने बारे,’ हल भन्छन्।
‘उनीहरूको लागि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी हो र यसले तिनीहरूको दिनको एजेन्डा तय गर्दछ ।’ हल थप्छन्, ‘मैले कूटनीतिज्ञहरू र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको सम्झना छ। उनीहरूले मलाई भने कि यदि उनीहरूसँग जानकारी छ कि उनीहरूको गुप्तचर सेवाहरूले विश्वास गर्दैनन् भने, पुटिनले आफ्ना जासुसहरू सही थिए भनेर मान्नुहुनेछ। र कूटनीतिज्ञहरू गलत छन्।’
कोभिड र अलगाव
यस समयमा पुटिनमा मानिसहरूको पहुँच पूर्ण रूपमा सीमित छ। उनलाई भेट्ने केही नेताहरू पनि उनबाट केही मिटर टाढा उभिन्छन्। तपाईंले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको उनको भेट याद गर्नुहुनेछ। दुवैजना एउटा ठूलो टेबलको दुई छेउमा बसिरहेका थिए।
यस्तो दुरी बनाउनुको कारण केही हदसम्म कोरोना संक्रमण हो । यसले एक्लोपन झनै बढाएको छ । कोभिड अवधिमा लागू भएका निर्णयहरूमा पुटिनको सुरक्षा व्यवस्था हेर्नेहरूलाई अनिवार्य दुई हप्ताको क्वारेन्टाइन आवश्यक छ। तिनीहरूले कडा चिकित्सा नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। वरपर बस्नेहरूले पनि निश्चित अन्तरालमा कोरोना परीक्षण गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन दिइँदैन।
मार्च १५ मा रूसी सरकारका प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोभले पुष्टि गरे कि जबसम्म विज्ञहरूले यसलाई सही ठान्छन् पुटिनको वर्तमान सुरक्षाको लागि कोरोनाले चालेका कदमहरू जारी रहनेछन्। त्यसोभए रूसमा तपाईको व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको कुराको रूपमा व्यवहार गरिन्छ।
सीआईए, एफबीआई, एनएसए र बाराक ओबामाका एक शीर्ष सल्लाहकारमा काम गरेका जनरल जेम्स क्लापरले पुटिन एक्लोपनमा रहेको बताए। ‘कोभिडका कारण पुटिन विगत दुई वर्षदेखि आइसोलेसनमा छन् । उहाँको वरिपरि धेरै कम व्यक्तिहरू छन् जो उहाँलाई पहुँच गर्न सक्छन्। तसर्थ, यसबारे बुद्धिमत्ता सङ्कलन गर्न पनि धेरै गाह्रो छ।’ क्लापरले भने ।
गेलोटी पनि त्यस्तै विश्वास गर्छन्। ‘पुटिन धेरै एक्लो छन्,’ उनी भन्छन्। उनका नजिकका मानिसहरुको सर्कल निकै संकुचित भएको छ । ‘देशमा उनको भ्रमण पनि निकै कम भएको छ । र सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनी निकै कम देखिने गर्छन् । सुरक्षा गार्डहरू मात्र ती व्यक्ति हुन् जससँग पुटिनको व्यक्तिगत सम्बन्ध छ।’
गेलोटीको अनुसार कसरी सुरक्षा गार्डमा मानिसहरूपछि उच्च पदहरूमा उचालिए ९यस सन्दर्भमा नेशनल गार्डमा पुटिनका पूर्व अंगरक्षक भिक्टर जोलोटोभलेको उदाहरण उद्धृत गरिएको थियो । केही गुप्तचर विज्ञहरूका अनुसार पुटिनको वरिपरि बनाइएको कडा सुरक्षा भनेको यसबारे एक किसिमको रुसी ‘फ्याड’ हो । कतिपय भन्छन् कि केजीबीमा रहेका राष्ट्रपतिले आफ्नो सुरक्षा कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने अरूलाई भन्दा राम्रोसँग थाहा छ।
यो सोच्नु सही हुन सक्छ, तर पुटिन वरपरको सुरक्षा घेराले उनको सुरक्षा र अलगाव निरन्तर बढ्दै गएको सुझाव दिन्छ। गेलोटी भन्छन्, ‘रसियामा पुटिनले चाहेजस्तै चीजहरू हुन्छन्।’